Naagihii Habar-majeerteen Oo Tobaneeyo Maxaabiis Ah Iyo Labo Gaari Laga Qabtay, Gix-gix.. – Codka Qaranka Tanadland
Naagihii Habar-majeerteen Oo Tobaneeyo Maxaabiis Ah Iyo Labo Gaari Laga Qabtay, Gix-gix..
Sawirka kor ka muuqda waa abaanduulaha ciidamada Somaliland halyey S/G (Maxamed Aadan Saqadhi "Dabagale") oo xiran tuutaha ciidamada uk iyo koofiyaddiisa ciidamada Somaliland. Abaanduuluhu wuxuu ku shabaaxayaa kuliyadda saraakiisha ciidamada uk hogaamiya lagu tababaro ee (Sundhurst) gudaheeda.
Halkaan ka dhegeyso waraysiga afhayeenka Somaliland oo u waramaya taleefishinka caalamiga ah (Somali Star TV).
Fiiro Gaar Ah: (Shugri Xareed) wasiir ku xigeenaddu marka ay leedahay “Weerar ayey Habar-majeerteen ciidanka somaliland ku soo qaadeen” waa afgobaadsi iyo jees-jees, ee ciidamada Somaliland ayaa weerarka qaaday oo xildhibaan ku sheega iyo mooryaanta la socota oo mahbarka midiidinka u ah soo qab-qabtay. Cid walbaana hada waa ay ogtahay oo warkaan meel kastaa looga maadsadaa.
Qarnigaan aynu Ku Jiro ee kow iyo labaatanaad waxaa lagu xasuusandoonaa qarnigii la gumeeyey beesha harti bawdyo-gaab. Beesha gobta ah ee reer (Shiikh) isixaaq waxa keliya oo u haray inay inta naagaha habar-majeerteen qab-qabato ay sidii xoolihii u suntadaan, oo ay sumadda ay geela ku dhigtaan ay wajiga uga dhigaan. Sababta oo ay tahay beesha isaaq si kale oo dhan waa ay u gumeysey gunta Habar-majeerteen. Dhulkoodii waa ay ka qabsatay intii badnayd. Isimadii beesha Warsangeli intii badnayd oo u ku jiro suldaankii beesha Warsangeli, Waxaa haysta beesha Isaaq.
Waagii degaamada beesha Dhulbahante la qabsanayey dhulbahantuhu dhulkooda inay difaacdaan wax xil ah iskama aysan saarijirin, oo waxay oranjireen beesha Habar-majeerteen ayaa lagarabaa inay dhulka noo difaacdo. Markii Dhulbahante dhulkiisa laga qabsadayna waxay oranjireen, Habar-majeerteen iyo Isaaq waa laba dowladood oo u dagaal ka dhexeeyo. Habar-majeerteen ayaana dhulkayaga ka masuul ahayd oo lagaqabsaday. Marka beesha Habar-majeerteen ayaa laga rabaa inay dhulkayaga noo xorayso. Dabcan nacasnimada ilaa xadkaas gaartey ilmo caruur ahina xataa waa u garankarey inaysan Dhulbahante dhulkooda ku heleyn. Habar-majeerteen kuna Dhulbahante dacaayad bay ka sameeyeen oo waxay u bixiyeen (Dhul-mahante).
Halkaan ka dhegeyso ducufada gunta ah ee beesha Warsangeli shirka jaraa’id ee ay ku qabteen xaafadda Mahbarku ay ka degaan magaalada Garoowe ee Horseed iyo waxa calaacal nacasnimo ah ka baxaya.
Waxaa iyaguna Dhul-mahante noqday 15 kii sano ee ugu danbeeyey beesha Warsangeli oo ka mid ah beelaha wax ka dega bariga gobalka Sanaag. Warsangeli tuulooyinkooda waxaa lagu qabsaday lacag sandareerto ah oo dhulkoodii ay ku iibsadeen. Magaalada Baran oo ku taala wadada isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Bosaaso, ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxay saldhig ciidan ay ku leeyihiin mudo 15 sanaddood ah. Hadii uu dagaal dhacana daqiiqado gudahood ayey ciidamada Somaliland ku qabsanayaan wadada laamiga ah. Lagamana yaabo in beesha Habar-majeerteen ay wax iska caabin ah samayso, xataa hadii ay dhanka Garoowe ama Bosaso ay u dhaqaaqaan ciidanka Somaliland si ay u qabsadaan.
Saldhiga sadexaad ee ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin degaamada bariga gobalka Sanaag oo ku yaala magaalada Baran, waxaa ku sugan ciidamo lixaad leh oo loogu talogalay beesha Habar-majeerteen inay hubka ka dhigaan markii loo baahdo. Waana ciidamo wadada halbowlaha ah ee isku xirta garoowe iyo Bosaso loo keenay in lagu cabsigeliyo beesha Habar-majeerteen.
Maadaama beesha Dhebayaco aysan ciidan ahaan u taageerikarin beesha Warsangeli, beeshsha dhebayaco beesha Warsangeli waxay ka taageertaa dhanka warbaahinta iyo dacaayadaha hawada laysu mariyo. Iyaga oo marka somaliland ay doorasho ku qabanayso degaamada beesha Warsangeli ka soo qaada filimo dad Warsangeli ah oo leh somaliland kama tirsanin.
Maalmihii ina dhaafay, websaydyada ay ku falaadaan ciyaalka Habar-majeerteen iyo midiidin (Faarax Axmed Caato), waxay soo qorayeen sheeko qiyaali ah oo ah in Baran uu ka dhacay dagaal gacanta laysula tagey, oo dhexmaray beesha Isaaq iyo beesha Habar-majeerteen. Iyaga oo ay ujeedadoodu tahay inay ka beensheegaan gunimada la gumeeyey beesha Habar-majeerteen. Iyo xaqiiqada ah inaysan ahayn beesha Habar-majeerteen beel ay ka suurowdo inay wax iska caabiso oo ay dagaalanto. Cabsi ay ka qabto in loo qabsado sida beelaha kale ee harti loo qabsaday darteed.
Hadaba xaqiiqda iyo sida ay wax u dhaceen waxay ahayd in ciidamada somaliland ee saldhigoodu yahay magaalada Baran ay u direen ciidan soo qab-qabta, niman warsangeli ah oo beesha Habar-majeerteen ay u soo dirtay inay faafiyaan dacaayado ku lidi ah Somaliland. Niman kaas tobaneeyada ah oo canaasiirta ah markii la weeraray waxay ku fureen ciidanka qaranka Somaliland rasaas. Rasaas taasna waxaa ku shahiidey mujaahid ciidanka Somaliland ka tirsan, waxaana ku dhaawacmay labo askari oo ka tirsan ciidamada somaliland. Lakiin nasiibwanaag naagihii Habar-majeerteen sidii dhaqanka u ahayd maysan dagaalamine kuligood waa ay isdhiibeen.
Saas Darteet ciidamada geesiyiinta ah ee Somaliland waxay gacanta ku dhigeen 10 nin oo beesha naflacaariga ah ee Habar-majeerteen ah. Waxay kaloo ay gacanta ku dhigeen labo gaari oo mid xaajiyad yahay iyo gaari weyn oo kuwa xamuulka qaada ah.
Beesha Warsangeli iyo Dhebayco waa labo beelood oo isku hooyo ah oo Habar-majeerteen ah, shakina iigama jiro inay garac yihiin oo uusan ku jirin dhiig Daarood. Habar-majeerteen waxay ka midyihiin quruunta ay dadka dhaladkaa ee Daarood ka ahi ay u yaqaaniin “Gaalomadow”. Oo aan la aqoon faracoodu meesha uu ka soo jeedo. U fiirso beesha Habar-majeerteen inay wacalo yihiin waxaad ku ogaaneysaa Daarood ka xalaasha ah la dhaqan iyo shucuur maaha. Ninka ragaa oo isku kalsoon marna isuma quuro inuu runta ka beensheego oo u qiyaali isku maaweeliyo. Qaasatan marka dagaalka looga gacansareeyo oo laga adkaado. Sidoo kale guuldaradiis nin walbaaba ma’u qirankaro. Waayo guuldaradiisa waxaa qirankara oo keliya nin hal’adayg leh oo isku kalsoon lana yaqaan wuxuu gudo iyo wuxuu galo.
Laasim waxaa ah ninka Habar-majeerteen ee Warsangeli iyo Dhebayaco markay isku hal mawduuc ay ka hadlayaan inuu hadalkoodu isku san-saan noqdo, oo hadalkooda nuxurkiisu uu hal meel ah isugu soo biyoshubto. Metalan, Dhebayaco ma’ay jecla inay soo hadal qaadaan ciidamada beesha Isaq ee xooga ku haysta degaanka Baran ee u dhexeeya magaalooyinka Bosaso iyo Garoowe, mudada 15 ka sanadood ah. Sidoo kale beesha Warsangeli ma’ay jecla inay qirtaan in dhulkoodii uu isaaq xoog ku qabsaday. Sababtoo ah ninku markuu qirto in dhulkiisii hadimo yahay oo laga qabsaday. Waa nin inuu dagaalamo ku talogalay oo raba dhulkiisa inuu xoraysto.
Sinjiyada Habar-majeerteen waa sinjiyad yaab leh oo aan meelna ka shabihin sinjiyadda iyo hab-dhaqanka beelaha dhaladka ah ee Daarood. U fiirso, degaanka Baran waxaa duulaanka qaaday ciidamada beesha Isaaq, Qasad kooduna wuxuu ahaa inay soo qab-qabtaan canaasiir Habar-majeerteen ah, oo degmada Baran degaan ka tirsan si dhuumaalaysi ah ku soo galay. Iyaga oo shacabka beesha Warsangeli ee degaan kaas ku nool fiidiyowyo ka soo duubay dacaayado raqiis ah, oo dabeedna warbaahinta mahbarka laga siidaayey.
Hadaba xaqiiqda hadaad rabtaan inaad ogaataan dhegeysta doqomada beesha Warsangeli cabaadka iyo calaacalka ka baxaya, Doqomada beesha Warsangeli caqlixumadooda waxay la yaabanyihiin beesha Dhebayaco bawdyo-kuus sababta ay ugu hiilin la’dahay. Waxayna ku barooranayaan sababta ay Habar-majeerteen wax taageero ah ay uga la’yihiin.
Laakiin lagamayaabo in ciyaalka beesha Habar-majeerteen iyo midiidinkooda (faarax axmed caato) inay baahiyaan shirka jaraa’id ee beesha Warsangeli. Sababta oo ah shirka jaraa’id ee beesha Warsangeli wuxuu ku yahay beesha Habar-majeerten wadnaqabad. Sababtoo ah qof kasta oo dhegeysta shirkaas jaraa’id wuxuu ogaanayaa inay beesha Habar-majeerteen tahay gun jabtay oo la haysto. Waxaa kaloo u cadaanaya qof kasata oo dhegeysta shirkaas jaraa’id in uusan dhicin dagaal labo ciidan ay isaga horyimaadeen. Ee uu dhacay hawlgal ciidamada Somaliland ay ku soo qab-qabteen canaasiir calooshooda u shaqaysteyaal ah oo dacaayad faafinaya.
Naagaha Habar-majeerteen waxaa lagu yaqaan waa duul daciif ah oo ficilo iyo hadal jilicsan, hadba meel waaqle ah ayey inta banaanbax ku qabtaan bay waxay lahaayeen 20 kii sano ee ina dhaafay caalamku hanagaqabto reer hebel. Kooxdii doqomada ahaa oo dagaalkii banka Dagaari lagu curyaamiyey oo dabeed xamar lagu xooray iyo qoladaan doqomada ah oo Warsangeli waxaa haysta xaalad iskumid ah oo xun. Waxay u habarwacanayaan Habar-majeerteen oo aan dhaqan u lahayn inay isu hiiliyaan xataa marka ay dagaal galaan, oo ninba ninka kale uu dagaalka oo socda ka cararo. Habar-majeerteen weligoodba gun bay ahaayeen la warjeefo oo taagdaran, weligoodna sidaas ayaa loo warjeefidoonaa waayo waa gun sinjiyad xun oo ducufo ah.
Ninka Habar-majeerteen nasab maaha ee waa adoon aan la dhaqan ahayn umadda Soomaaliyeed oo dhan. Ninka Habar-majeerteen wuxuu dhaqanka ka shabahaa dugaaga aan xoolaha dilankarin ee baqtiga hiiga marka uu qurmo, marka neefka xayawaanada dila ay inta nuxurka leh ka cunaan. Ninka Habar-majeerteen tuute iyo hub ayuu inta qaato oo u dhooqo ismariyo, ayuu meel rag dakane ka qaba ka fog intuu tago uu cabsi darteed shafka dhulka dhigtaa. Isagoo aan dagaal marna ku talogelin ee ujeedadiisu ay tahay dumarka iyo caruurta aad qatashid oo nin haku moodeen.
Weligoodna lama arag lamana maqal iyaga oo marxalad dhacday ama goob dagaal oo lagu jebiyey siday wax u dheceen runta ka sheega. Xataa waxaa lagu yaqaanaa marka ay reer dakane ka qaba ay ka aarsadaan oo ay nin ka dilaan. Marka la yiraahdo nin kaas maydinkaa diley?, inay yiraahdaan kutaab noo keena oo na dhaarsada inaanaan nin kaas aidinka dilin. Taasi waxay ku tusaysaa runta sheegideedu inay dhaqan gobeed tahay, Habar-majeerteena aysan karti u lahayn aana looga baran inay runta qiraan.